UDkt Blade Nzimande usaqhubeka nezaba zokuthi ukuze kubekhona imali yemfundo ephakeme yamahhala, ukhakha wangasese kufanele ufake imali . Inkinga ngalokhu kucabanga ukuthi ukuncenga umkhakha wangasese ausiso isisombululo. Asikwazi ukuncika kwisihe sabamabhhizinisi njengoba kunezinkampani ezifihla izigidi zenzuzo yazo phesheya ngenhloso yokubalekela ukukhokha intela. UNgongqoshe weziMali uGordhan unawo amandla okuvala izikhala ezisetshenziswa yilezi zinkampani, aqiniseke ukuthi lezi zinkampani ziyayikhokha ingxenye yazo yentela.
Ngonyaka ka-2012 kuphela, izinkampani eMzansi zafihla phesheya imali edlule ezigidini ezingama-$29 ngenhloso yokubalekekla ukukhokha intela kwa-SARS.Lemali ilingana nokubuyekezwa kweNkandla okuphindwe ka-1300 , . Lezi zigidi zingakwazi ukusiza abafundi ukuthi bathole imfundo ephakeme esezingeni eliphezulu.
Izinkampani zizifihla kanjani izigidi phesheya ekubalekeleni ukukhokha intela kwaSARS? Izinkampani zihloma ngabameli kanye nabagcini mabhuku abazisiza ekutholeni izikhala emithethweni kanye nemigomo elawula intela ngenhloso yokukhokha intela encane. Umzekelo, izinkampani ziye zenze amahhovisi-mbumbulu ezindaweni ezifana noBermuda, lapho ziye zikhokhise ihhovisi lazo eliseNingizimu Afrika izimali ezishisiwe . Lokhu kungamanye wamaqhinga wokufihla inzuzo ngaphandle kwaseNingizimu Afrika, kuthi uma kuziwa kwintela lezi zinkampani zibike inzuzo encane okuhamba kuthinte ukulethwa kwezidingo ngqange. Thina, bantu baseMzansi sikhokha intela nge-VAT njalo uma sithenga impuphu, i-airtime, siphinde sikhokhe intela emholweni. Ziningi iznkampani ezingakhokhi intela - ngokwenza njalo, zidlala ngekusasa lethu. Yingakho sibambisane nozakwethu kwa-Oxfam kanye ne-Economic Justice Network sicela kuNgqongqoshe weziMali uGordhan ukuthi kube khona akwenzayo.
Sithula kuwe ukuthi uthathe izinyathelo ekuvimbeni izinkampanini ezinkulu kanye nabadla izambane likapondo ukuthi bafihle inzuzo phesheya. Siseka izinyathelo eziphakamisa ukubekwa emthethweni i-mandatory country-by-country reporting ezolawula izinkampani ezinkulu. Loku kuzophoqa izinkampani ukuthi ziveze inzuzo eziyenza kwamanye amazwe. Ohulumeni kufanele babenamandla okwabelana imininingwane ephathelene nezimali baphinde bakhuthaze ukusebenzisana kanye nokulandela imigomo enqunyiwe ngabalawuli bentela. Akufanele kubekhona zaba ngokungakhokhi ntela. UNgqongqoshe omdala weziMali, uNhlanhla Nene, wasilalela, waphinda wahambela kwelase-Addis Ababa kwi-United Nations Financing for Development ngenhloso yokulwela ukulandelwa kwe-country-by-country reporting. Sicela uqhubeke naloku akuqalayo okubalwa kukho ukuqalwa kwamabhuku yabanini kanye nalabo abahlomula ngezinkampani kanye nama-trust. Umphakathi kufanele ube negunya lokubheka lawo mabhuku, ukuze kube nzima ukufihla imali yenkohlakalo, eyobugebengu kanye neyokubaleka ukukhokha intela. Njengesinyathelo sokuqala, sinxusa izinkampani ezifaka amabhidi ezinkontileka zomsebenzi kahulumeni zidalule ukuthi ngobani abanini benkampani abahlomulayo.
Njengoba wazi ngombiko we-No-fee varsity owacelwa nguDkt Blade Nzimande oveza ngokusobala ukuthi imfundo yamahhala ingenzeka eMzansi, sifuna kuwe ukuthi ucabange ngeziphakamiso okubalwa kuzo ukuqokwa kwamalevi akhokhelwa izinkampani zangasese kanye nemiholo eya kwezemfundo. Sixhasa inhlangano yeFeesMustFall ekufuneni imfundo yamahhala kwabantulayo ngoba singumphakathi sidinga ubulungiswa, okudinga ukuqondwa ngobuphelele ekuthuthukiseni umphakathi .
 Blade Nzimande criticises Big Business-too greedy. Transformation/August 31 2015.
 The Department of Higher Education and Training. Report of the working Group on Fee Free University Education for the Poor in South Africa. October 2012.
UNgqongqoshe weziMali uPravin Gordhan ungaphansi kwengcindezi yokuthi afeze izinjongo ze-#FeesMustFall. Esikhundleni sokuncenga umkhakha wangasese ukuthi wenze isisa, makabhekane nezinkampani ezingakhokhi intela ngokufihla imali phesheya.